Iphupha malunga nokulunywa yinyoka Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga nokuluma inyoka
Kubantu abaninzi, inyoka sisilwanyana esiyingozi esoloko sibangela uloyiko. Ukoyika iinyoka yenye yezona zinto zixhaphakileyo. Ke ngoko, ayiqhelekanga ukuba inyoka iphinde ibonakale njengomqondiso wephupha. Amaxesha ngamaxesha ide ilume umntu ochaphazelekayo ephupheni. Kodwa inokubonisa ntoni le ngozi isongela ubomi? Kuchazwa njani ukulunywa yinyoka njengomfuziselo wephupha?
Ukuze uqonde ngcono kwaye utolike iphupha lakho lokulunywa yinyoka, sichaze kula macandelo alandelayo iimeko eziqhelekileyo zamaphupha ezinxulumene nokulunywa yinyoka ephupheni.
1 Uphawu lwephupha «ukulunywa yinyoka» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Iingalo, izandla kunye nenyoka ziluma ephupheni.
1.1.1 Nceda, ndiphuphe inyoka iluma engalweni yam!
1.1.2 Ewe, kubuhlungu! Inyoka ephuphayo iluma ngesandla
1.2 Ubuso bonakaliswe ngokupheleleyo kukulunywa yinyoka ephupheni.
1.3 Inyoka ephuphayo iye yaluma emqolo.
1.4 Imilenze, iinyawo nenyoka ziluma ephupheni.
1.4.1 Inyoka iluma emlenzeni: liphupha elibuhlungu
1.4.2 Phupha ngokulunywa yinyoka ezinyaweni zakho
2 Uphawu lwephupha «ukulunywa yinyoka» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ukulunywa yinyoka» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ukulunywa yinyoka» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukulunywa yinyoka» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Iingalo, izandla kunye nenyoka ziluma ephupheni.
Nceda, ndiphuphe inyoka iluma engalweni yam!
Ukuba iphupha lifumana inyoka engalweni, oku kubonisa ukuba abanye abantu bayayithintela inkululeko yakho yokwenza. Ngokukodwa, inyoka iluma ingalo yasekunene, ethathelwa ingqalelo njengeyona yomeleleyo, luphawu lokusilela okubonakalayo ukuba umntu ophuphayo angahlangabezana nako. Nangona kunjalo, uphawu lwephupha "ingalo yasekhohlo ekulunyweni yinyoka" imele izithintelo ezincinci ezinokoyiswa ngokukhawuleza.
Ewe, kubuhlungu! Inyoka ephuphayo iluma ngesandla
Nabani na ophuphayo ngokulunywa yinyoka esandleni mhlawumbi kufuneka alungiselele ingxaki kwicandelo lobungcali. Idrive yoyilo kunye nobuchule bephupha bunokucothiswa zizithintelo ezahlukeneyo ekufuneka ziqale zoyisiwe. Ukulunywa yinyoka ephupheni ngakwesobunxele kubonisa iingxaki ezincinci, umntu ophuphayo anokuphila kakuhle.
Ubuso bonakaliswe ngokupheleleyo kukulunywa yinyoka ephupheni.
Iphupha lokulunywa yinyoka ebusweni libonisa umntu ophuphayo ukuba umfanekiso wakhe uqobo unokubuzwa ngabantu abamngqongileyo. Isidima sakho sisenokuba sengozini. Umphuphi kufuneka azibuze ukuba ingaba ibachaphazela njani abanye abantu kwaye ukuba wanelisekile yile mbono yangaphandle.
Inyoka ephuphayo iye yaluma emqolo.
Ukuba umntu uphupha inyoka iluma emqolo, umntu ophuphayo kufuneka azilungiselele into yokuba abantu abasondeleyo kuye banokumyeka xa ekwimeko eyingozi. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba kuthintelwe iingozi ezinokubakho kwasekuqaleni.
Imilenze, iinyawo nenyoka ziluma ephupheni.
Inyoka iluma emlenzeni: liphupha elibuhlungu
Umnyhadala wephupha, apho inyoka yalunywa khona kumlenze wasekhohlo okanye wasekunene, ibonakalisa umntu ophupha ubuqhetseba obunokubakho kwimeko yabo. Kufuneka ulumke ngakumbi kwaye ukrokre xa abantu ongabaziyo bekwenza izithembiso ezinkulu kuwe. Kuya kufuneka ulumke malunga nabakhohlisi.
Phupha ngokulunywa yinyoka ezinyaweni zakho
Njengalo elinye ilungu lomzimba, unyawo lumele isidingo somntu sokuqhubela phambili. Ukulunywa yinyoka kunyawo lasekhohlo okanye lasekunene kubonisa umntu ophuphayo, ke ngoko, ukuba ukuhamba kwabo kunokuthintelwa kwixesha elizayo. Kwelinye icala, oku kunokuba kukwenzakala kweenyawo okwenyani, kwelinye icala, ukuqhubela phambili kobuchule komphuphi kunokuthintelwa ziimeko ezahlukeneyo.
Uphawu lwephupha «ukulunywa yinyoka» - ukutolikwa ngokubanzi
Nabani na olunywa yinyoka ephupheni, enokuthi ibe yityhefu, kufuneka alumke kungekudala. yayo Uzuko Ugrogrisa ngokwenzakala, oko kunokukhokelela kwilahleko enkulu yedumela lakho. Umphuphi kufuneka ngokuqinisekileyo azame ukunqanda iimeko ezinzima kwaye anganiki ezinye izizathu zokubuza indlela aziphethe ngayo. Ukongeza, kufuneka uzikhusele kumayelenqe. Ibhinqa elisondeleyo kuloo mntu lisenokuba liceba ngobuqhetseba ukumqhatha.
Kodwa inyoka inokuba nayo isilumkiso Babandakanya ukungashukunyiswa ngokulula ngabanye kunye nokuhamba ngomzekeliso "ngendlela engalunganga." Ezinye zisenokubangela ilahleko yeshishini kulowo mntu kuthethwa ngaye, kodwa kuya kufuneka uhlale unyanisekile kwimilinganiselo yakho kwaye uwamkele la lahleko. Kungale ndlela kuphela apho amaxesha angcono anokubuya kwakhona.
Ukuba kukho umlo phakathi kweenyoka ezimbini ezilumanayo ephupheni, iwonga lomphuphi lisengozini. Kubalulekile ukuba lo mntu kuthethwa ngaye akazivumeli ukuba aphenjelelwe ngabanye abantu kwaye amkhokelele kwizenzo ezigwenxa zokuziphatha.
Uphawu lwephupha «ukulunywa yinyoka» - ukutolikwa kwengqondo
Iingcali zengqondo zithatha ukuba inyoka eluma ephupheni luphawu lwento ekhoyo ebomini bokwenyani. Yintlungu ingayi. Kunokwenzeka ukuba umntu ekuthethwa ngaye unoloyiko olukhulu lweenyoka kwaye oku kubonakaliswe ngamaphupha amabi.
Kwakhona, ukulunywa yinyoka eluhlaza ephupheni nako kunokuchaphazela utshintsho ube kubomi bamaphupha. Iinkqubo zakho zokuqonda okungafaniyo namava amva nje, anokukhokelela umntu ekubhekiswa kuye ukuba athathe ulwalathiso olutsha ebomini, mhlawumbi ukutshintsha imisebenzi, ukukhangela iqabane elitsha okanye ukuhamba. Kuya kufuneka uzame ukufumanisa kwinqanaba lokuqonda ukuba yeyiphi indawo ebomini bakho onokungonwabi kunye nento ongathanda ukuyitshintsha.
Ukongeza kwezi nguqulelo zinokwenzeka, nangona kunjalo, inyoka iluma ikakhulu iyeka. Isimboli sesondo Ukusuka kwimbono yengqondo, inesilumkiso ngokuchasene nabantu abenza ubuqhetseba abazama ukuphembelela ubomi bothando bamaphupha. Umntu othile ufuna ukutshabalalisa ubudlelwane kunye neqabane lakhe okanye aphephe unxibelelwano olunokwenzeka. Kubalulekile ukuba ulinde kwaye unganiki aba bantu ithuba lokuchaphazela ukhetho lwakho lweqabane.
Uphawu lwephupha «ukulunywa yinyoka» - ukutolika kokomoya
Ukulunywa yinyoka kunokukufuzisela kwinqanaba lokomoya utshintsho zimele. Xa uphupha, ungathanda ukushiya inqanaba elithile lobomi ngasemva kwaye ulangazelele utshintsho. Nangona kunjalo, kweliphi icala ekufuneka liye kulo, kuphela ngumntu ochaphazelekayo onokuzazi.